Ukuthi Ingane Yakho Ihlala Kangakanani Ixhomekeka Kusetshenziswa Kwamadivayisi Wezingane | I-GFUN
Angazi ukuthi zisebenza kanjani izinto zokudlala zezingane? Le yinkinga ebhekene namakhasimende amaningi asanda kungena ebhizinisini. Kunamabhizinisi amaningi okuphendula amakhasimende angalungile kangako njengoba ecabanga. Eqinisweni, lokhu akuyona inkinga yedivayisi.
Uma sikhetha indlela yokuphatha efanele, singayandisa kakhulu imali esiyitholayo. Ukusebenza kwemishini yokudlala yezingane kube yinkinga enkulu. Njengasebhizinisini, uma ungenalo ulwazi, ngeke ukwazi ukuthola ukuthi kungani amadivayisi afanayo angenza imali endaweni efanayo.
Lokhu kukhethwa kwendlela yebhizinisi. Uma ufuna ukuphatha imishini yakho yokuzijabulisa, kufanele wazi indawo yakho kanye nabantu abasondele kuwe. Lapho ukhetha ukuthenga imishini yokudlala yezingane, khetha imishini efanelekile leyo ndawo. Isebenzela abantu abaningi abasensimini.
Khumbula ukuthi imishini yokudlala ayiyona eyezingane kuphela. Okwezindlela zokusebenza kwemishini yokudlala yezingane, ngokuya ngezindawo zabo kanye nemishini ethengiwe yokuhlela. Kuya ngebanga, isikhathi nenani labantu. Akunakwenzeka ukusho ngokungaboni ukuthi yenza imali.
Lokhu akuyona yesikhathi eside.
Uma ungazi ngempela ukuthi usebenza kanjani noma usebenze kahle, sizoklama izindlela eziningiliziwe zokuphatha zesiza sakho, isixuku kanye nemishini yokubhekana nokukhathazeka kwakho! Imishini yokudlala yezingane ingavusa isifiso sezingane isikhathi eside. Izingane zihlala zinelukuluku ngayo yonke into, izinto ezintsha ziyathandeka kubo, nokuthi ungakugcina kanjani lokho kukhangana kuncike ekuhambeni.
Isibonelo, izinqaba zezingane ezingenamqondo, ezinezinto ezahlukahlukene, ezinkulu nezincane, izingane zizoba nokuqonda okuhlukile ngaso sonke isikhathi lapho zidlala, kulula ukuheha ukuthi zizodlala kaningi. Umkhathi womdlalo uphephile. Ezokuphepha bezilokhu ziyinkinga kusukela ekuqaleni. Uma kunesici sokuphepha entweni yokudlala yezingane, ngeke isebenze. Ngakho-ke, lapho utshala imali ekugibeleni, kufanele ukhethe umakhi okwazi ukuthenga abagibeli abaphephe ngempela.